Antoko "Vitantsika io" : Manaiky izay Didy avoakan'ny HCC
jeudi, 03 janvier 2019 17:31
Ady efa nitolomako hatramin'ny ela ny hisian'ny fifidianana madio, mangarahara, lavitry ny kolikoly sy ny vola.
Nisafidy nanohana an'i Marc Ravalomanana aho niaraka tamin'ny Antoko "Vitantsika io", noho ny tolo-tanana nomeny hanao fampihavanam-pirenena sy fampandrosoana ny faritra.
Raha misy ny olona na programa tsy tokony notohanako dia i Marc Ravalomanana, nefa zava-dehibe amiko ny fifamelana, ny fibebahana, ny fanonerana ary ny fihavanana. Ny tetikasa azo iadian-kevitra avy eo.
Tsy midika fa adinoko ny zavatra rehetra nataony na ny tsara na ny ratsy. Fa ezahina hioharana izany raha te hiroso amin'ny tena fampihavanana.
Ankehitriny, miady hisian'ny fahadiovan'ny fifidianana aho.
Tsy fombako kosa ny midina an-dalambe, na dia tsy manome tsiny ny namana manao izany koa aho, satria Zo fototra ny maneho ankalamanjana ny hevitra.
Manameloka kosa aho ny fampiasan-kery handratrana ireo Malagasy mitaky ny marina.
Olon'ny fanarahan-dalàna aho, ary miezaka manabe ny olona amin'izany.
Miantso ny HCC hijoro sy hitsara araky ny lalàna. Kihon-dalana goavana eto amin'ny firenena ny fanampahan-kevitra raisinareo.
Manaja tanteraka, araky ny nambarako matetika, ny Didy izay avoakan'ny HCC aho, miaraka amin'ny Antoko "Vitantsika io", ka izay fanapahana eo, na izay Filoha lany eo, dia ho Filoham-pirenena ho an'ny rehetra, ary tokony eken'ny rehetra.
Farany, manentana ny andaniny sy ankilany hifanaja hatrany, tsy hifampihantsy, ary anaiky izay Didy mivoaka eo.
Aza adino fa 24 % n'ny Malagasy ampy taona ihany no nifidy izay Filoha ho lany eo (2 tapitrisa amin'ny 10 tapitrisa feno taona). Ny 24 % hafa tsy nifidy azy, ary ny 52 % samy tsy niraika na tamin'ny andaniny, na tamin'ny ankilany.
Firenena iombonana izy ity, tsy misy afaka hilaza fa azy irery ka hanao izay tiany atao irery eto. Ny firaisankinantsika rehetra ihany no ampandroso ity Madagasikarantsika ity, ny mpitondra mandalo fa ny Firenena sy ny vahoaka Malagasy mitoetra.